Posted by Nirajan Thapa August 05, 2013
कोरियन भाषा परीक्षा पासगरी कोरिया जान नपाएका इपियस पिडीत मेरा प्रिय नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबैनीहरू,
तस्वीर स्रोतः अनलाइन खबर डट कम
विदेश तिमीहरुले सोचेजस्तो सजिलो छदै छैन । देशमै जस्तो झाराटार्ने कामले विदेशमा न कोरियन वन कमाउन सकिन्छ, न युरो न त रिंगेट नै । हुन त तिमीहरुको रुमानी कल्पनामा विदेशको झिलिमिली मात्र होला, तर नबिर्स केहिगरी तिमीहरु कोरिया पुगिनै हालेछौ भने त्यो तिमीहरुको जीवनकै कठिनतम दिनहरु हुनेछन् । हुन त म आफै नेपाल छाड्नुअगाडि निकै नै उत्साहित थिएँ । यहाँ आइसकेपछिका दुईचार दिन पनि निकै नै उत्साहित रहेँ । जब कामका लागि दौडधुप गर्न शुरु गरेँ र काम नपाएर रित्तो हात कोठामा फर्किन विवश हुन्थेँ त्यतिखेरका कुनैपनि मेरा साँझहरु ओभाना थिएनन् । हुन त तिमीहरुलाई मैले जस्तो काम खोजिरहनु पर्दैन तर काम पाएपछिको मेरो अनुभवसँग कोरियामा काम गर्न जानेहरुको अनुभूतिचाँहि थोरै भएपनि समानान्तर हुन सक्लान । त्यसकारण मैले लेख्नैपर्ने हुन्छ जुन काममा मेरो जति मेहनत अहिले बग्दैछ त्यति नै मेहनत र लगनशिलता मैले मेरै देशमा बगाउन सक्ने हो भने म निश्चिन्त छु – त्यसको प्रतिफल मैले यहाँ प्राप्त गरेभन्दा ज्यादा हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरो त म यहाँ जुन स्तरको काम गर्दैछु त्यो कामले मलाई सिकाउने केही पनि हैन तर विवशताको बाबजुद मैले काम गर्नैपर्ने हुन्छ । हुन त लागेको होला तिमीहरुले भाषा परीक्षामा शतप्रतिशत अंक ल्याएको छौं नभएपनि ९० भन्दा माथि अंक हासिल गरेका छौं, काम सहज र भव्य हुनेछ । यदि त्यस्तो सोच पालेका छौं भने मेरो विनम्र आग्रह छ – नपत्याए तिमीहरुको जस्तै अंक प्राप्त गरेर कोरियमा पसिना बगाईरहेका युवाहरुलाई सोध कि तिमीले गर्नुपर्ने काम के हो ? कति जोखिमपूर्ण काम छ त्यहाँ ? साहूले कस्तो ब्यवहार गर्दछ ? र, कति मानसिक दबदबामा बस्नुपर्दछ त्यहाँ । तिमीहरु किन अबुझ बन्छौ आखिर ? के कोरिया पुगेका सबै नेपाली युवा श्रमीकहरुको सहज दिन बितिरहेछन् त्यहाँ ? महिनौपछि सबैको छुट्टीको दिन मिलाएर उनीहरुले मनाएको छुट्टीको रमझमको तस्बीरहरु वा घुमघामको तस्बीरहरु हेरेर यदि तिमीहरुले कोरिया साँच्चीकै स्वर्ग हो भन्ने बुझेका छौ भने मेरो अनुरोध यत्ति छ – कृपया ती हसिँला तस्विरहरुमा लुकेका पीडाहरु देख्ने कोशिस गर !